Ukulungiswa kwesisindo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ukulungiswa kwesisindo
Indlela yokunciphisa umzimba
ezaposwa ngomhla 05.02.2020 05.02.2020
Iiponti ezongeziweyo yingxaki yanamhlanje echaphazela uninzi lwabemi behlabathi. Kukho inani elikhulu kuzo zonke iindlela onokuzama ngazo ukususa le ngxaki, imalunga nabo kwaye ...
Intwasahlobo ifikile- lixesha lokuba unciphise umzimba
ezaposwa ngomhla 04.02.2020 04.02.2020
Into enomdla kukuba, ngesiqhelo entwasahlobo, abasetyhini (kunye namadoda amaninzi) bayakhumbula ukuba kufuneka banciphise ubunzima! Lo mnqweno unxulunyaniswe nokukhanya okuthe kratya kwelanga, ukutshintsha ikhabethe lasebusika liye kwelikhanyayo, ...
Ukunciphisa umzimba kunambitha kwaye usempilweni
ezaposwa ngomhla 03.01.2020 03.01.2020
Enye yezona ndlela zisebenzayo ukunciphisa umzimba yindlela kaGqirha Gavrilov. Inkqubo yokunciphisa umzimba ibandakanya amanqanaba aliqela. Ukulungisa ngokuchanekileyo ngokwasengqondweni ukulahla ubunzima obugqithisileyo, chonga izizathu zengqondo zokutya kakhulu; Funda…
Kutheni usela i-apile cider iviniga enobusi ukuze unciphise ubunzima
ezaposwa ngomhla 26.09.2019 26.09.2019
Uninzi alunamathandabuzo malunga nokutya ekuthiwa kukutya kwiviniga, xa kucetyiswa ukuba kuselwe iviniga yeapile kunye nobusi ukunciphisa umzimba. Siza kuzama ukususa amathandabuzo akho kwaye sichaze ukuba kutheni isiselo esilungiswe ngokufanelekileyo sisebenza ...
Ndixelele, pzhl. , izidakamizwa ze-Redux zithengiswa ngemithi? Yaye yintoni umehluko phakathi kweR Reduxin kunye neR Reduxy?
Ndixelele, pzhl. , Ngaba ichiza leReduxin lithengiswa ngugqirha? Nguwuphi umahluko phakathi kwamalungiselelo eReduksin kunye noReduksi.NgokuKhanya kweReduksin, ungaze ucinge ngako, vele ulahle ubuvila bakho ...
Yintoni isisindo esifanayo kwi-13 yamantombazana?
Bobuphi ubunzima obuqhelekileyo kwi-13 yamantombazana? Kumantombazana, ubunzima obuqhelekileyo ziikhilogram ezingama-43-52. Ukuba ubunzima obungaphantsi kwama-32 nangaphezulu kweekhilogram ezingama-69, oko kunokwenzeka ukuba kukugula. Kum…
Yintoni onokuyidla isidlo sakusihlwa xa uhleli ekudleni?
Unokutya ntoni kwisidlo sangokuhlwa ngelixa utya? Ukuba usekutyeni, emva koko unokutya isidlo sangokuhlwa, ngokulingana nokulingana entendeni yesandla sakho. Kungcono utye kahlanu e ...
Ziziphi iimveliso ezibonakala kwisisu kunye namacala kunye nendlela yokuzilahlekisa ngayo?
Kukuphi ukutya okudala isisu kunye namaqatha kunye nendlela yokuzihambisa? yitya iilekese ezimbalwa kwaye isidlo sokugqibela kufuneka sibe yiyure ezi-3 ngaphambi kokulala !!! Isisu, sishukumise yonke imihla ...
Ukufumana ubunzima obuqinileyo, wenzeni?
Ukufumana ubunzima ngokukhawuleza, kufuneka wenze ntoni? http://sportbok.narod.ru/fit.html Kufuneka uhambe ngaphezulu - ubunzima - okanye amanqatha - ezi azitshisi khalori- kuba utya kancinci, oko kuthetha ukuba ushukuma kancinci- ...
Kutheni uxinzelelo kunye neentsholongwane zinciphisa umzimba?
Kutheni uphulukana nobunzima kuxinzelelo kunye nemithambo-luvo? Kungenxa yokuba akukho kutya, ngenxa yoko uphulukana nobunzima. Ndiyatyeba Ngokwam, xa ndinemivumbo, ndiyalibala ngokutya- ndisela amanzi nditshaye kakhulu. Ngoko ke…
Ubusi ngeendlela zokutya ?? kwaye zingaphi iikhalori kwi-1 i-teaspoon yobusi. Yonke into oyaziyo, kwaye ngokwabo
Ubusi ekutyeni ?? kwaye zingaphi iikhalori ezikwi-1 itispuni yobusi. Yonke into oyaziyo, kunye nawe buqu.Umxholo wekhalori wobusi unantoni yokwenza nayo? Unokutshintsha iswekile ngobusi kusasa, kuba iqulethe ...
Ziziphi iipropati eziye zenza i-plunes, kwaye ingayinceda nantoni na yonke ukuba ikhululeke?
Zeziphi iipropathi ezinazo iiprunes, kwaye ngaba iyanceda ukunciphisa umzimba konke konke? awuyi kuphulukana nobunzima obuninzi ngayo, iqulethe ii-carbohydrate ezininzi, kodwa kwizitulo ezithambileyo-ewe, kuqhelekile ukwetyisa. Iluncedo ngokungathandabuzekiyo. ...
Ukutya: Ngaba iprotheni yeentlanzi ingathatha inyama?
Ukutya: Ngaba iprotein yeentlanzi iyakwazi ukubuyisela iprotein yenyama? Akukho kutya kuninzi emhlabeni okutyebileyo kwi-omega-3 fatty acids kwaye zonke iiamino acid ezifanelekileyo zilungele intliziyo kunye nemithambo yegazi. Kwintlanzi, ziqulathwe ...
ukuba Ngaba kukho enye iklabishi endikwazi ngayo ukunciphisa umzimba?
ukuba. ikhona iklabishi enokwenzeka ukunciphisa umzimba ??? Ikhalori esezantsi-khalori…. umhlobo wam wayitya (ungumqeqeshi wokomelela komzimba). Uthe ungatya kangangoko uthanda. Kodwa kwangaxeshanye, watya i-cottage cheese kwaye ...
Kungcono ukuba nidle isidlo sakusasa xa uhamba ukuhlalisa umzimba?
Sesiphi isidlo sakusasa esona silungileyo ukuba uzimisele ukunciphisa umzimba? cottage cheese.)) inkqubo thabatha ama-60 ... umgaqo wesidlo sakusasa kude kube li-12 yiyo yonke into oyifunayo, ngaphandle kokunikela ingqalelo kubungozi kunye nenani leekhalori, isidlo sasemini kunye ...
Yintoni i-aerobics yokunyathela?
yintoni inyathelo le-aerobics? I-Stepaerobics ngumdaniso we-aerobics owenziwa ngamaqonga akhethekileyo "amanyathelo". Iingcali zikholelwa ukuba inyathelo le-aerobics lilungile kuthintelo kunye nonyango lwe-osteoporosis kunye ne-arthritis, kunye nokomeleza izihlunu ...
Nceda undixelele ukuba yintoni ukutya okunempilo kakhulu ngaphandle kokulimala kwimpilo ???
Nceda undixelele ukuba yeyiphi eyona ndlela yokutya efanelekileyo ngaphandle kokulimaza impilo ??? Eyona isebenzayo: Ukutya kwesidlo seBon Ngaba ukuchitha ixesha leeholide kushiya uphawu lwalo esiswini sakho, emathangeni nasezimpundu? Kwa ingcinga ...
indlela yokulahleka ubunzima ekhaya
Indlela yokwehlisa ubunzima ekhaya yitya kancinci) Yitya ekhaya nantoni na oyifunayo, kodwa hayi kwizabelo ezikhulu kwaye uhlambe imigangatho yonke imihla ngezandla zakho Indlela yokwehlisa umzimba ekhaya ngumbuzo lowo. Kwaye unokuncipha ...
Lithini igama elithi DRYING lithetha ntoni kubadlali? Kutshanje wabona umgijimi ebhala ukuba wayomile. njani ukuyiqonda?
lithetha ntoni igama elithi UKOMA kwiimbaleki? Kutshanje ndibone imbaleki ibhale ukuba iyoma. ndingaqonda njani? eyona nto ibalulekileyo uyilibale abafana! Into ephambili kukuba uqeqesho! kwaye konke malunga nokutya ...
Ngaba kunokwenzeka ukuba udle i-funcho xa udla?
Ngaba ungayitya i-funchose ngelixa utya? Umxholo wekhalori we-funchose kwifom egqityiweyo ungaphantsi kakhulu kwifom eyomileyo, kwaye yi-87 kcal kuphela kwi-100 g yemveliso. Ke, umxholo wekhalori we-funchose ebilisiweyo ...
Page 1 Page 2 ... Page 16 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-3456 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-49,507.